घुसको बिलौना - प्रशासन प्रशासन
प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार ११:३०
दुई अक्षरले बनेको “घुस” म निकै चर्चा कमाउन सफल भएको छु । पत्र पत्रिका, रेडियो, टिभी लगायतका समाचार माध्यममा मेरो खुबै चर्चा हुन्छ । पत्रकारहरूको लागि त म मसला नै बन्छु । जतिसुकै चर्चा कमाउन सफल भए पनि मेरो कुनै ठेगान छैन । एक ठाउँमा शान्तसँग मैले बस्न पाएको छैन ।
कहिले यता, कहिले उता, कहिले तल, कहिले माथि के कुन ठाउँमा मेरो प्रयोग हुन्छ, त्यसको कुनै ठेगान छैन । जहाँ जसरी भए पनि मलाई प्रयोग गरिएको छ । मैले पनि चुप लागेर दुनियाँको स्वार्थ पुरा गर्नपछि लागिरहनु पर्ने, कस्तो विडम्बना ! भित्री रूपमा म जति प्यारो छु, बाहिरी रूपमा म त्यो भन्दा बढी बदनाम भएको छु । मेरो न्वारान पनि कसले गरिदिएको रहेछ, कस्तो साइतमा मेरो नामकरण भएको रहेछ, मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै मान्छेले छिःछि गरेर मलाई हेला गरेर हिड्छन ।
नेतादेखि कर्मचारी, ठेकेदार, व्यापारीसम्म मलाई यति माया गर्दछन् कि सायद उनीहरू मेरा सच्चा प्रेमी नै हुन । गहिरो लभ नै पर्‍यो कि जस्तो लाग्छ। तर Valentine Day जस्तो मेरो कुनै Day हुँदैन । One side Love पर्‍या जस्तो मेरो पछि दगुरेका दगुर्‍यै हुन्छन् । म भने भाग्दै हिँड्छु । दुनियाँको सामुन्ने मेरो बदनाम नहोस्, कसैले मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै छिःछि नगरोस भनी आफ्नो इज्जत जोगाउन लुकी लुकी हिँड्ने गरेको हुन्छु । तर के गर्ने मसँग One side Love गरिरहेकाहरू पनि मलाई लुकी लुकी नै भेट्न मन पराउँदा रहेछन् ।
खुला ठाउँमा र सबैले देख्ने ठाउँमा म कहिल्यै छाती फुलाएर हिँड्न नपाउने रहेछु । मेरो प्रयोग त अँध्यारो कोठा, होटेलका कोटिहरूमा, ट्वाइलेटमा तथा बजारका गोप्य गल्लीहरूमा हुँदो रहेछ । कति बेला सोच्छु मैले पनि आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ, स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ । खुल्ला रूपमा हिँड्न र बोल्न पाउनु पर्दछ । तर मेरो साथ दिने कोही भेटिँदैनन् । लोकतन्त्रमा अरूले अधिकार पाउने मैले भने लुकी लुकी चोर जस्तै हिँड्नुपर्ने ।
ती घुस्याहा भनाउँदा नेता, कर्मचारीहरू मेरो स्वतन्त्रता र सम्मानका लागि किन लडुन्, जबकि तिनीहरूले मलाई अँध्यारो कोठी र कुना कन्दरामा मात्र भेट्न मन पराउँदछन् । मलाई एकान्त ठाउँमा बलात्कार गर्न पल्केका ती भ्रष्ट्राचारीले मेरो पक्षमा किन आवाज उठाउन त ?
कस्तो विडम्बना मसँग लुकी लुकी एकतर्फी माया गरिराख्ने ती भ्रष्ट्राचारीहरुले आफ्नो नामको अगाडि मेरो नाम झुण्ड्याई सच्चा प्रेमी प्रेमिकाको पहिचान किन दिँदैनन् ? यदि मसँग सच्चा प्रेम गर्थे भने त आफ्नो नाम घुस्याहा कर्मचारी, घुस्याहा नेता, घुस्याहा ठेकेदार, घुस्याहा व्यापारी राखेर रवाफ देखाई हिँड्नुपर्ने !
कस्तो अचम्मको लीला छ मेरो, अफिसमै पनि टेबुलमाथिबाट खुलेर मलाई कसैले लिँदैनन् । टेबुल मुनिबाट लुकेर मलाई लिने, फायलको भित्र लुकाएर, ट्वाइलेटको कोठामा पसेर, रक्सी भट्टीमा गल्लीका कुना कुनामा मलाई प्रयोग गर्न पल्केका नरपिचासहरु तपाईँले मलाई यति खेलौना बनाउँदासम्म मैले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने ? तिमीहरूले गर्नसम्म मलाई शोषण गर्दा, त्यसको बदलामा के दिन्छौ त ?
तिमीहरूको कारणले म कति बदनाम भएको छु यसको बयान गरी साध्य छैन । मन्त्रीहरूले कानुन मिचे, पदको दुरुपयोग गरे मेरै कारणले, ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गरेनन् मेरै कारणले, कर्मचारीले फायल अड्काउने, काम नगरिदिन, जनतालाई दुःख दिने मेरै कारणले, हेर्दा हेर्दा त सानो कामको लागि पनि मेरो प्रयोग हुन थाल्यो । अब त सबैले प्रयोग गर्ने भाषा नै भइसक्यो, घुस बिना केही काम हुँदैन ।
आखिर म नै रहेछु सबै कामको बिगाडतन्त्र राष्ट्र डुबाउने, ढुकुटी रित्ताउने, कर्मचारीतन्त्र बिगार्ने, नेता बिगार्ने, विकास हुन नदिने, कालोबजारी गर्ने लगायतका कार्यमा मेरै पो हात रहेछ । साँच्चै म त महान् खलनायक पो रहेछु । तर मैले चाहेको थिएन । म खलनायक हुन पाउँ भनेर, मलाई कुनै रहर पनि थिएन यतिसम्म बिगाडतन्त्र बन्ने । मलाई यतिसम्म बदनाम गराउने, मलाई खलनायक बनाउने अरू नै हुन । मलाई लुट्नसम्म लुटे, शोषण गरे, ठुला ठुला महल खडा गरे, चिल्ला कारमा हिँडे, ठुला ठुला भुँडी बनाए,5Star होटेलमा बसी ह्विस्की, रेड लेभल सँगै मासुका चोक्टा तानेर मोजमस्ती गरी हिँडे अनि बदनाम चाही मैले हुनुपर्ने । स्रष्टाले पनि कस्तो वरदान दिएका, मैले यतिसम्म के बिगारेको थिए र ?
अब भने म पनि न्यायको लागि लड्छु, अड्डा अदालतमा धाउँछु, आफ्नो सम्मान, स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि मुद्दा दायर गर्दछु । यो लोकतन्त्रमा मैले पनि सम्मानपूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ, स्वतन्त्र भई हिँड्न पाउनु पर्दछ । यति गर्दा पनि न्याय पाएन भने मेरो मुक्तिका लागि म यमराजको शरणमा जान्छु । जबसम्म मेरो अन्त्य हुँदैन, मेरो मुक्ति हुँदैन, तबसम्म यो देशमा सच्चा लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्दैन, देशमा सुशासन आउँदैन, कानुनको शासन स्थापना हुन सक्दैन, दण्डहीनता र भ्रष्ट्राचारले प्रश्रय पाउँछन्, कालोबजारी मौलाउँदै जान्छ । तसर्थ यो देशको उज्जल भविष्य, यो देशमा जनताको संवृद्धिको लागि र नेपाल आमाको शिर ठाडो पार्नका लागि भए पनि म यो देशबाट बिदा हुन चाहन्छु ।
मलाई यो देशमा न्याय मिल्दैन भने म यमराजको शरणमा गएर आफ्नो र यो देशको मुक्ति दिलाउन चाहन्छु । म जति बदनाम र तिरस्कृत भएको छु, त्यो मेरो कारणले होइन । मलाई बदनाम गराउने यो देशका शोषक, सामन्त, भ्रष्ट, दलाल र राक्षसी मानसिकता भएका नरपिचासहरु हुन ।
अब म भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु, अब मेरो अन्त्यसँगै यी भ्रष्ट, सामन्त र दलाल नरपिचासरुको पनि अन्त्य होस । नेपाल र नेपाल आमाको श्राप लागोस्, देश डुबाउनेहरू सबैको अन्त्य होस।
मेरो अन्त्यसँगै जबसम्म मेरो पछि लाग्ने भ्रष्ट्राचारीहरुको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म यो देशमा सुशासन र संवृद्धि आउँदैन। तसर्थ म घुसको अन्त्यसँगै घुस्याहा र भ्रष्ट्राचारीको पनि अन्त्य होस भनी भ्रष्ट्राचारीको अन्त्यको कामना र यो देश र जनताको दिर्घायुको लागि प्रार्थना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु । नमस्कार । जय होस् ।
२२ मंसिर २०७६, आईतवार १०:००
आर्थिक कूटनीति : कूटनीतिमा उदीयमान प्रवृत्ति
आर्थिक कूटनीति भनेको कूटनीतिकै एउटा उदीयमान रूप हो जसमा राज्यका
२२ मंसिर २०७६, आईतवार ०७:२७
समृद्धिको आधार : साक्षर नेपाल
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रत्येक नेपाली